ဝိသေသလက္ခဏာငါးခုသည်ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်ခြင်းထုပ်ပိုးစက်ရုံကိုယနေ့ပြုလုပ်သည်။ စျေးကွက်ရှိပုံနှိပ်ခြင်းထုပ်ပိုးထုတ်လုပ်သူများသည်မညီမညာဖြစ်နေကြသည်။ သို့သော်ပုံနှိပ်ထုပ်ပိုးသည့်စက်ရုံကောင်းများမရှိပါ။ ဒီနေ့ခေတ် SmartFortune ပုံနှိပ်ခြင်းကကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်ခြင်း၏ထူးခြားချက်များကိုသင့်အားရှင်းပြလိမ့်မည်။
သေနတ်အိပ်ပါ! Woolworths စူပါမားကတ်စက္ကူအိတ်၏မူလအစသည်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သည်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ခေါင်းစဉ်တပ်ခဲ့ကြသော်လည်းမကြာသေးမီကစက္ကူအိတ်ငယ်တစ်လုံးသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်သြစတြေးလျမှ Woolworth စူပါမားကက်သည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကယခင်ပလတ်စတစ်အိတ်များကိုအစားထိုးခြင်းဖြင့်သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအိတ်အသစ်များကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဂေဟာ ...
ထုပ်ပိုးခြင်းအမျိုးအစားတစ်ခုအနေဖြင့်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာများသည်ထုပ်ပိုးခြင်း၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သောကုန်စည်များအားလုံးလုံးလျားလျားကာကွယ်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပို့လွှတ်ခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများမြှင့်တင်ခြင်းတို့ကိုအောင်မြင်ရမည်။ လက်ဆောင်သေတ္တာသည်စိတ် ၀ င်စားမှုရှိသောဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလည်းဖော်ပြသင့်သည်။
သုတေသန - ပုံနှိပ်ထားသောစာအုပ်များသည် e-book ထက်ကလေးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပိုကောင်းသည်
မတ်လ ၂၇ ရက်ထုတ်ဗြိတိသျှရိုက်တာသတင်းစာကဖော်ပြသည်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလေ့လာမှုတစ်ခုအရမိဘများသည်ကလေးများအားပုံနှိပ်စာအုပ်များကိုeစာအုပ်များထက်ဖတ်ခြင်းကပိုအကျိုးရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ နှင့်ဤအပြန်အလှန် ...
လက်ဆောင်သေတ္တာထည့်ခြင်းသည်ထုပ်ပိုးသေတ္တာထုတ်လုပ်သူများအတွက်ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာများပြုလုပ်ရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာ၏အရည်အသွေးကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်သည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်လက်ဆောင်သေတ္တာထည့်ခြင်း၏ပစ္စည်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားလည်မှုနည်းပါးနေဆဲဖြစ်သည်။ လက်စွဲစာအုပ် ...
စိတ်တိုင်းကျစက္ကူလက်ဆောင်သေတ္တာစစ်ဆေးခြင်းတွင်သူ၌ကိုယ်ပိုင်စံသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာထုတ်လုပ်သူတွင်ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာစစ်ဆေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သတိထားသင့်သည်မှာပုံနှိပ်ခြင်းစံနှုန်းဖြစ်သည်။ စက္ကူသေတ္တာစစ်ဆေးခြင်း၏စံသည်သာမန်လူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါမောက္ခကိုအသုံးမပြုပါ။
လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဆောင်ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာများကိုအကြမ်းအားဖြင့်ခွဲခြားထားသည် - စာအုပ်ပုံစံသေတ္တာများ (အထုပ်သေတ္တာများဟုလည်းခေါ်သည်)၊ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးအဖုံးသေတ္တာများ (အမြင့်နှင့်အောက်အိတ်သေတ္တာများဟုလည်းခေါ်သည်) နှင့်အထူးပုံသေတ္တာများ။ စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်ကတ်ထူပြားကိုမည်သို့ထုတ်လုပ်ရမည်ကိုအောက်တွင်ပြပါ - SmartFortune Pac မှ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ဗေဒနှင့်သက်ဆိုင်မှုအချို့ရှိသည်။ ဒီတော့ထုပ်ပိုးသေတ္တာများဘုံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအမျိုးအစားများကဘာတွေလဲ? ဒီနယ်ပယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံနှိပ်စက်ရုံကို (၂၅) နှစ်ကျော်ကထုပ်ပိုးပြီးပါပြီ။
ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ဖိုင်စနစ်နှင့်အရောင်တင်ခြင်း - အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် - ဖိုင်တွင်အသုံးပြုသောအရောင်များကိုမည်သည့်အဓိကအရောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း - CMYK စနစ် (သို့) RGB စနစ်ခွဲခြားထားသည်။ Term ဖော်ပြချက်: ၁။ အဓိကအရောင်များ - အခြေခံအရောင်များကိုအခြားတန်ချိန်များဖြင့် ပြုလုပ်၍ မရပါ။ အဓိက ...
<< <နောက်သို့ 123456 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၃/၆